Tamby amin'ny fampianarana - Nivoaka ny vola 50 000 ariary ho an’ny mpanabe • AoRaha
Tonga ilay nandrasana. Nivoaka ny vola 50 000 ariary tambin-karaman’ireo mpampianatra sy mpiasa ary ny mpandraharahan’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, fampiofanana ara-teknika sy araka asa (Menetp), taorian’ny fitakiana nataon’izy ireo. Nangataka sahady ny fiarahamientan’ny Fikambanan’ny sendikan’ny fanabeazana eto Madagasikara (Pasem) ny amin’ny firosoan’ny fitondrampanjakana ihany koa amin’ny fanatanterahana ireo teboka hafa nifanaovana sonia, tamin’ny taona 2018.
“Ankasitrahana ireo mpampianatra manerana ny Nosy sy ireo mpiasa rehetra naharitra niandry sy nampiseho fahendrena na dia nisy aza ny fahatarana kely tamin’ny fikarakarana ny famoahana ny tambin-karama 50 000 ariary. Antenaina fa hisy fiezahana ny tsirairay amin’ny fanatanterahana ny asa sahaniny ho tombontsoan’ny zaza malagasy sy ny firenena”, hoy ny minisitra Andriamanana Rijasoa Josoa.
An-kilany, miantso ny fitondrana sy ny matihanin’ny fanabeazana sy ireo mpiara-miombon’antoka rehetra ny Pasem mba hiaro ny asa eo anivon’ny Menetp sy ny karaman’ ny mpiasa ao aminy. Tsy tokony hailika any amin’ny olana ateraky ny “Covid-19” izany ka hanitsahana ny zon’ny mpiasa na hampidinana ny karama. Maika indrindra ny tokony handoavana ny karaman’ny mpampianatra any amin’ny tsy miankina, ny mpampianatra Fram, ny « vacataire » ary ny ECD.
Fahamehana ara-pahasalamana :: Faritra telo ihany no didian’ ny fanjakana hihiboka